Mayelana R & D
imisebenzi ehlukahlukene R & D okufaka Ukulungiselela, amasu ukuhlolwa umkhiqizo kanye namazinga imikhiqizo yamakhemikhali. Inkampani yethu kabanzi agglomeration yolwazi, ubuchwepheshe, namatalenta nezinye izakhi ezintsha, futhi uyazifeza emisha engokwesayensi neyezobuchwepheshe esimeningcondvo ukuhwebelana kwembulunga yonke kwezomnotho nokuthuthuka okusheshayo ulwazi umnotho.
Amathimba R & D
Inkampani yethu ine namathimba amaningana ucwaningo nokubambisana. Ngesikhathi esifanayo, amaqembu ethu aqukethe abasha abafundi zobudokotela liyakhula, okuyinto usibekile isisekelo ithalenta ukuthuthukiswa ngokushesha-R & D. Ithimba banamathela umqondo kokuphishekela engcono Akupheli, balwela anikele amakhasimende abathandekayo izinga ezinhle umkhiqizo wethu.
Thina isungule ngokubambisana neNhlangano amabhizinisi amaningi. laboratories Ucwaningo lezisekelo zezimboni sezisunguliwe lonke China, kuhlanganise headquaters e Shanghai, base ezimbonini Jiangshu, Zhejiang futhi Hubei. Sinazo ikhono ukukhiqiza imikhiqizo eyikhwalithi kanye nokunciphisa ukungcoliswa kwemvelo, umthombo nokusetshenziswa kwamandla ukukhiqiza.